Vaovao - Ahoana ny fividianana solomaso amin'ny endrika endrika
Tongasoa eto amin'ny orinasa!
Sunglass amin'ny fanatanjahan-tena
2020 solomaso mivarotra mafana
Sunglass an'ny zaza
7 andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 7:00 hariva
Ahoana ny fividianana solomaso amin'ny endrika endrika
Efa manana olana ve ianao amin'ny fiezahana hamantatra izay karazana frame mety indrindra amin'ny tarehyo? Tsara vintana ianao! Miaraka amin'ny mpitari-dalana kely anay, ho hitanao fa misy endriny ho an'ny rehetra - ary afaka milaza aminao izahay hoe inona no mety indrindra aminao!
Inona no endrika bika ananako?
Azo inoana fa manana ny iray amin'ireo endrika endrika manaraka ireto ianao: boribory lavalava, toradroa, boribory, fo, na diamondra. Amin'ny fijerena fitaratra iray sy ny fijerena akaiky ny endrikao no ahafahanao mahita izay mifanitsy aminao! Vakio eto ambany raha hijery ny fomba hamantarana hoe iza ny endrika bikan'ny tarehy misy anao, ary inona ny solomaso ho hita lafatra aminao.
Iza amin'ireo endrika solomaso no mety amin'ny tarehy lavalava?
Ny solomaso maro samihafa dia miendrika tarehy boribory. Ny endrika manana endrika boribory lavalava dia misy takolaka ambony sy somary malalaka kokoa izay somary tery kokoa mankany amin'ny handrina. Ity endrika endrika lava sy boribory ity dia mamela anao hisintona saika ny fomba rehetra - indrindra ireo zana-kazo lehibe sy malalaka. Miaraka amin'ny endrika tarehy lavalava, aza misalasala mandeha sahy manana loko mahafinaritra, endrika na endrika bika. Kianja, trapezoid, sokatra ary mahitsizoro - tsy misy farany ny azo atao!
Ny toro-hevitra tokana dia ny familiana ireo zana-kazo tery sy zana-kazo miaraka amin'ireo singa famolavolana mavesatra. Mety hanampy kely ny halavanao tsy ilaina amin'ny tarehy boriboryo izy ireo.
Iza amin'ireo solomaso izay mifanitsy amin'ny tarehin'ny kianja?
Ny karazana solomaso maro karazana dia miendrika tarehy toradroa. Valahana ho efamira! Raha manana endrika miendrika efa-joro ianao, dia azo atao tsara ny mandoko ny masonao amin'ny masomaso roa. Raha ny refy no jerena, ny tarehy toradroa dia midadasika indrindra manaraka ny valanoranony sy ny handriny. Noho io endrika nofaritan'ny valanorano mahery io, ny solomaso mipetraka ambony eo amin'ny orona dia manampy halava mandoko ity tarehy ity.
Mba hisarihana fifantohana amin'ireo endri-javatra matanjaka indrindra anao dia safidio ny maizina sy boribory fa tsy ny angular. Ny zoro solomaso boribory dia hihamalefaka ary koa hampisy fifanoherana amin'ny fijerinao ny angola, hampisongadina ny endrikao. Ny frame tsy misy Rimless sy semi-rimless dia toerana tsara hanombohana.
Fotoana fandefasana: Aug-18-2020
Raiso ny vaovao farany atolotra isan'andro!